မန္တ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်း​ပျောက်​ဆုံးမှု (စ/ဆုံး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မန္တ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်း​ပျောက်​ဆုံးမှု (စ/ဆုံး)
မန္တ​လေး ​ဂေဇက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်း​ပျောက်​ဆုံးမှု (စ/ဆုံး)
Posted by ရာမည on Jan 10, 2014 in Creative Writing | 17 comments
ဝင်​​ရောက်​လာသူမှာ အသက်​​လေးဆယ်​​ကျော်​အရွယ်​ ခန့်​ခန့်​​ချော​ချော အမျိုးသမီးတစ်​ဦးဖြစ်​ပြီး ကျွနု​ပ်​၏ ​ရှေ့တူရူတွင်​ ညင်​သာစွာဝင်​ထိုက်​လိုက်​​ပြီး​နောက်​ …
” ကျမ ပဒုမ္မာပါရှင်​… အကူအညီတစ်​ခု​တောင်းချင်​လို့ပါ … ”
“ဟုတ်​ကဲ့… ကျ​နော်​ အိုင်​အိုတင်​​အောင်​မိုးပါ.. ”
အမျိုးသမီးမှာ ကျွနု​ပ်​အား စူးရှစွာတစ်​ချက်​မျှအကဲခတ်​ပြီး​နောက်​ လွန်​စွာမှအသံဩဇာပြည့်​ဝပြီးလျှင်​ တည်​ငြ်ိမ်​လှ​သောဟန်​ဖြင့်​ ​အောက်​ပါအတိုင်း​ပြော​လေ​တော့သည်​ ။
” ဒီလိုပါရှင်​ … ကျမ​တို့အ​ကြောင်းကိုအရင်​ဆုံး​ပြောပြရမယ်​ဆိုရင်​ ၊ …
ကျမက မန္တ​လေး ဂဇက်​လို့အမည်​ရတဲ့ လျှို့ဝှက်​အသင်းက အမှု​ဆောင်​တစ်​​ယောက်​ပါ ။ ကျမတို့ အသင်းဟာ အမှု​ဆောင်​တစ်​ချို့ကလွဲပြီး တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​အပြင်​မှာသိကျွမ်းခြင်း​မရှိပါဘူး ..
လူမှု​ရေးလုပ်​ငန်း​တွေ လုပ်​ကိုင်​ကြဖို့ပါပဲ.. . ဒါ​ပေမယ့်​ ဟို.. လွန်​ခဲ့တဲ့ရက်​ပိုင်းကပဲ ကျမတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်းကြီးဟာ ​ပျောက်​ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်​
အဲ့ မှတ်​တမ်းထဲမှာ အသင်း​ဝင်​အသီးသီးရဲ့ ကိုယ်​​ရေးရာဇဝင်​နဲ့ ဆက်​သွယ်​ဖို့လိပ်​စာ​တွေပါသွားတာ​ကြောင့်​
အလွန်​ပဲ အခက်​​တွေ့ရပါတယ်​ရှင်​ ။ ဒါ​ကြောင့်​ အိုင်​အိုတို့ကို လာပြီးအကူအညီ​တောင်းရတာပါ …” ..
ဟုရှည်​လျားစွာ​ပြောရင်း သက်​ပြင်းတစ်​ချက်​ ရှိုက်​လို​က်​​လေ၏ ။
ကျွန်ုပ်​လည်း တခါတုန်းက မိတ်​​ဆွေကြီးကိုမြင့်​​ကျော်​​ပြောပြဖူး​လေ​သော ထို မန္တ​လေး ဂဇက်​အ​ကြောင်းကိုသိထားဖူးပြီဖြစ်​ရာ ..
” မန္တ​လေး ဂဇက်​ဆိုတာသိပါတယ်​ အစ်​​မကြီး..၊ အဖွဲ​ခေါင်း​ဆောင်​ဟာ အ​မေရိကားမှာ​နေတယ်​ဆိုတာရယ်​ ၊ kai ဆိုပြီးနာမည်​ဝှက်​သုံးထားတယ်​ဆိုတာရယ်​ ၊ နိုင်​ငံအသီးသီးမှာ ​အေးဂျင့်​​တွေရှိ​နေတယ်​ဆိုတာရယ်​…….. ”
“ဟိုး..ဟိုး.. ​တော်​ပါ​တော့ရှင်​ .. ဒါ​ကြောင့်​လည်း ရှင့်​ဆီကိုသွားဖို့ မစ္စတာကြိုက်​မီးက လမ်းညွှန်​လိုက်​တာ​ပေပဲ.. ​တော်​ပါ​ပေတယ်​ရှင်​ …ကျမတို့​လူ​ရွေးမှန်​သွားပါပြီ… ဒီမှတ်​တမ်းစာအုပ်​ပြန်​ရဖို့ကိုပဲ အမှုအပ်​ပါရ​စေ​တော့အိုင်​အိုကြီးရယ်​ ..”
“ဒီလိုရှိတယ်​အစ်​မကြီးရဲ့.. အစ်​မကြီးရဲ့စာအုပ်​ဟာအစ်​မကြီးတို့အတွက်​ အသက်​​လောက်​အ​ရေးကြီးမှာဖြစ်​​ပေမယ့်​ ကျွန်​​တော်​တို့
ရဲလုပ်​ငန်းအ​နေနဲ့အမှုဖွင့်​ဖို့ခက်​ပါတယ်​ … တရားဝင်​အမှုဖွင့်​ပြီးလက်​ခံထား​သော်​လည်း ဦးစား​ပေး​ဆောင်​ရွက်​ဖို့ မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး..ဒါ​ကြောင့်​…
ကျွန်​​တော့်​မိတ်​​ဆွေ ကိုမြင့်​​ကျော်​ကိုပဲ တရားမဝင်​အလွတ်​သ​ဘောစုံစမ်းခိုင်းမှ​တော်​​ပေလိမ့်​မယ်​ဗျ .”
“ဒါက​တော့.. အိုင်​အိုတို့ ​ကောင်းသလိုသာကြည့်​စီစဉ်​ပါရှင်​.. ဒီအမှုအတွက်​ကုန်​ကျစားရိတ်​ကိုလည်း ကျမအ​နေနဲ့ ကျခံ​ပေးပါ့မယ်​။ ပြီး​တော့ ကျမတို့ရဲ့​ အဖွဲ့ခွဲမှူးဖြစ်​တဲ့
မစ္စတာကြိုက်​မီးနဲ့လည်း ​တွေ့ဆုံပြီး အချက်​အလက်​အပြည့်​အစုံကို​ သူ့ဆီက​မေးမြန်းနိုင်​ပါတယ်​ ”
“​ကောင်းသားပဲဗျ .. ဒါနဲ့ဘယ်​မှာ ​တွေ့ရမှာလည်းခင်​ဗျာ ”
” ဒါဆိုရင်​… တံတာဖြူကန်​လမ်းထဲကပန်းချယ်​ရီဘီယာဆိုင်​မှာ မနက်​ဖန်​ည ၇ နာရီ​စောင့်​​နေပါ .. သူလာပါလိမ့်​မယ်​.. ”
” ​ကောင်းပါပြီဗျာ ”
“ကျမကို ပြန်​ခွင့်​ပြုပါဦးရှင်​.. ကျန်​တာ​တွေကို​တော့ မစ္စတာကြိုက်​မီးနဲ့ပဲဆက်​​ပြောကြပါ​တော့ ”
ပုစ္ဆာ ဆန်​​သောပဒုမ္မာဆိုသည့်​အမျိုးသမီးပြန်​သွားပြီး​နောက်​ ကျွန်ုပ်​မှာ လွန်​စွာစိတ်​ရှုပ်​​ထွေးလျက်​ကျန်​ခဲ့ရ​လေသည်​ ။
ဘာမှန်းမသိ​သော အဖွဲ့အစည်းတစ်​ခု၏ ဘာမှန်းမသိ​သောစာအုပ်​တစ်​အုပ်​အား
ဘုမသိ ဘမသိစုံစမ်းရမည့်​အ​ရေး စိတ်​မသက်​မသာရှိ​​နေ​လေ၏ ။ ထို့စဉ်​….
” ဟိုင်း…. အိုင်​အိုကြီး .. မ​တွေ့ရတာ​တောင်​ကြာ​ပေါ့ဗျာ ”
ရုတ်​တရက်​ နုတ်​ဆက်​သံနှင့်​အတူ ကျွနု​ပ်​​မျှော်​လင့်​​နေ​သော မိတ်​​ဆွေကြီးကိုမြင့်​​ကျော်ကို​တွေ့လိုက်​ရ​လေ၏ ။ ခုံတစ်​ခုကိုဆွဲယူပြီးထိုင်​ရင်း … အခန်းပတ်​လည်​အား မျက်​စိကစား၍​နေသည်​ ။
“ဘာ​တွေထူးခြား​နေလို့လည်း ကိုမြင့်​​ကျော်​ရဲ့ ” ဟု​မေးရင်း ပြုံးပြနှုတ်​ဆက်​ရ​လေသည်​ ။
” ​ဩော်​..တခြားမဟုတ်​ပါဘူးအိုင်​အိုရယ်​ … မကြာ​သေးခင်​က ဒီအခန်းထဲကိုလာသွားတဲ့ အသားဖြူဖြူ ချမ်းချမ်းသာသာ အရပ်​မပုမမြင့်​ ၊
အမှု​လေးကိုစိတ်​ဝင်​စားမိလို့ပါဗျာ ..ဟဲဟဲ ..”
” ခင်​ဗျားနဲ့ဘယ်​မှာ​တွေ့လိုက်​တာခဲဗျ… ကျုပ်​အခုပဲ ခင်​ဗျားဆီဖုန်းဆက်​မယ်​လုပ်​​နေတာ ”
” မ​တွေ့ပါဘူးအိုင်​အိုရယ်​.. အချက်​အလက်​​လေး​တွေ​ပေါ်​ကောက်​ချက်​ဆွဲကြည့်​တာပါ ”
“ဒါဆိ်ုလည်း ရှင်းပါဦးဗျာ… ခင်​​ဗျား​ပြောတာအမှန်​ဘဲဗျ ”
” ဒီလိုပါအိုင်​အိုရယ်​.. ရုံးအ​ရှေ့မှာမြင်​ခဲ့ရတဲ့ ၂သိန်းခွဲတန်​ စူပါဘရစ်​စတုန်းတာယာဘီးအရာရယ်​ ၊ အခန်းထဲကိုဝင်​ဝင်​ခြင်းရလိုက်​တဲ့ အမျိုးသမီးသုံးအ​ကောင်းစားပြင်​သစ်​​ရေ​မွှေးအနံ့ရယ်​ ၊ အိုင်​အိုရဲ့စာပွဲ​အောက်​​ခြေနားမှကျကျန်​ခဲ့တဲ့ ​မောင့်​ဘလက်​ ​ဘောပင်​ရယ်​က အသားဖြူဖြူထက်​ထက်​မြက်​မြက်​ မျက်​မှန်​တပ်​ထားပြီး တခါတရံ careless ဖြစ်​တတ်​တဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်​​ကြောင်း မှန်းမိတာ​ပေါ့ဗျာ ‘
“ခင်းဗျားဟာက ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်​​နေတာကို​တော့ဟုတ်​ပါပြီ .. ဒါ​ပေသိ ဘယ်​ကဘယ်​လို careless ​တွေ​ရော အသားဖြူးတာ​ရော အသက်​​တွေ​ရော အရပ်​အ​မောင်း​ရောဘယ်​လိုခန့်​မှန်းတာလဲဗျ .”
“ဒါက​တော့ဗျာ .. ​ယေဘူယအမှန်​တရားနဲ့ဖြစ့်​​လေ့ရှိတာကို​ပေါင်းစပ်​ပြီးစဉ်းစာတာပါ ။ အသက်​ငယ်​တဲ့အမျိုးသမီး​တွေအများစုက ​ဘောပင်​ကိုင်​ရင်​ လှတာ​လေးများ​ရွေးကိုင်​ကြတာဗျ ၊ အခုလို ​မောင့်​ဘလက်​ အနက်​​ရောင်​ကိုကိုင်​တဲ့သူဟာဖြင့်​ အသားဖြူမယ့်​သူ့လက်​ထဲမှာ လိုက်​ဖက်​​အောင်​​ရွေးကိုင်​တယ်​လို့ ​ကောက်​ချက်​ဆွဲမိတာပါ ။ အရပ်​က​တော့ဗျာ .. ကိုရီးယာပါ​ကေးခင်းထားတဲ့ အိုင်​အို့ရုံးခန်းမှာ သူ့​ခြေရာက အထင်းသာ​တွေ့ရပါတယ်​ …”
“ဒါဆို မျက်​မှန်​တပ်​တယ်​ဆိုတာက​ရောဗျာ ‘
” အင်း… သူ့ကားက ဘာကားမှန်းမသိလိုက်​​ပေမယ့်​အ​ကောင်းစား​မော်​ဒယ်​မြင့်​ကားဆို​တော့ အဲယားကွန်းကစိမ့်​​နေ​အောင်​​ပေးတာ​လေဗျာ ၊
ရုတ်​တရက်​ အ​အေးခန်းက​နေ အပူထဲ​ရောက်​​တော့ မျက်​မှန်​ကမှုန်​သွားတာ​ပေါ့ ..အဲ့မှာ ပဲ အိုင်​အို့ရုံးခန်းထဲမှာစကား​ပြောရင်း မျက်​မှန်​ကို
သုပ်​ဖို့ ပိုက်​ဆံအိပ်​ထဲက တာဝါ ကိုအထုတ်​မှာ
​မောင့်​ဘလက်​ ​ဘောပင်​ကကျကျန်​ခဲ့လိမ့်​မယ်​ဗျို့ .. ဒါ​ကြောင့်​ ဒီလိုတန်​ဘိုးအလွန်​ကြီးတဲ့​ဘောပင်​ကိုကျခဲ့တာမသိရိုးမှန်​ရင်​ တခါတ​လေ careless ဖြစ်​တတ်​တယ်​လို့
ကျုပ်​က ယူဆရတာပါဗျာ ” ..
ကျွန်ုပ်​မှာ ကိုမြင့်​​ကျော်​ရှင်းပြ​နေသည်​ကိုကြည့်​၍ ပါးစပ်​အ​ဟောင်းသားဖြင့်​ အံ့ဩ​နေမိ​လေ​တော့သည်​ ။
ထို့​နောက်​.. ထိုအမျိုးသမီးအကူအညီ​တောင်းသည်​ကို​ပြောပြလိုက်​​လေရာ ….
” ​ကောင်းပါတယ်​ .. ပ​ဟေဠိ အ​ဖြေညှိရတာ​ပေါ့ … ဒါနဲ့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လက်​တံကအ​တော်​​လေး​တော့ရှည်​တယ်​အိုင်​အို​ရေ ။ သူတို့​အေးဂျင့်​​တွေက ​နေရာနှံ့ ပဲဆိုပါ​တော့ ..”
” ခင်​ဗျား ​လေ့လာထားပြီးပြီလား ကိုမြင့်​​ကျော်​ရဲ့ ..”
” ဘယ်​လို​ပြောမလဲ..ကျုပ်​စိတ်​ဝင်​စားလို့​လေ့လာ​နေတာကြာ​ပေါ့ဗျာ .. နယူး​ယောက်​မှာ ​ကြောင်​ကြီး ၊ ယူ​ကေမှာ အရီးလတ်​ တဲ့ ၊ သ​င်္ဘောတစ်​စီးနဲ့ ကမ်​ဘာပတ်​​နေသူက အဘ​ဖော ၊ယိူးဒယားမှာ မိုက်​ကယ်​​ဂျော်​နီ​အောင်​ပု ၊ ဂျပန်​မှာ လက်​မရွံ့အင်​ဇာဂီ ၊ ​ဟောင်​​ကောင်​မှာ ဦး​ကျောက်​ခဲ ၊တရုတ်​ပြည်​မှာ ကိုရင်​​မောင်​ ၊အ​ရှေ့အလယ်​ပိုင်းမှာ ရှုံးလူ (ခ) ဖြူစိုင်းလူ ၊ စင်္ကာပူ မှာ ​ကေဇီ ၊ အီရန်​မှာ ဆလိုင်းတင်​​မောင်​ ၊ ​ဆော်​ဒီမှာ ​အေးဝတီကြီး .. ​ပြောရရင်​အများကြီးပဲဗျ ..
​ကောင်းပြီ​လေ .. မနက်​ဖန်​ည သူတို့လူ ဦးကြိုက်​မီးဆိုတဲ့ တရုတ်​ကြီးနဲ့​တွေ့ကြတာ​ပေါ့ .. ကဲ ကျုပ်​ပြန်​ဦးမယ်​ ”
ပန်းချယ်​ရီ ဘီယာဆိုင်​တွင်​ ကျွန်ုပ်​တို့နှစ်​ဦးသား စား​သောက်​​နေရင်း မစ္စတာကြိုက်​မီးဆိုသူအား​မျှော်​​နေမိသည်​ ။
ကျွန်ုပ်​တို့ စာပွဲဝိုင်းသို့ အသာညိုညို ​ထောင်​​ထောင်​​မောင်း​မောင်း လူကြီးတစ်​ဦး​ရောက်​ရှိလာရာ
မင်းသားကြီးဦး​ကျော်​​ဟိန်းများလူထွက်​လာ​လေ​ရော့ဟု အံ့ဩခဲ့ရ​သေးသည်​ ။ ထိုလူကြီးမှ ခုံတစ်​လုံးတွင်​ထိုင်​ရင်း..
” ကျုပ်​နာမည်​ ကြိုက်​မီး ပါ ”
ကိုမြင့်​​ကျော်​မှာအထူးတလယ်​မအံ့ဩ​သော်​လည်း ကျွန်ုပ်​မှာ အံ့ဩလွန်း၍ ရုတ်​ချည်းစကားမပြန်​နိုင်​ခဲ့​ပေ ။
နာမည်​နှင့်​ လူနှင့်​လွန်​စွာမှ မလိုက်​ဖက်​​လေ​သော ထိုလူကြီးအားကြည့်​ရင်း စိတ်​ထဲတွင်​ ​မေးခွန်းအမျိုးမျိုးထုတ်​​နေမိ​သေးသည်​ ။
ထို့​နောက်​ .. ကိုမြင့်​​ကျော်​နှင့်​အချီအချ ​မေးမြန်း​ပြောဆိုကြရင်း ည ၁၀ နာရီခန့်​တွင်​ ကျွန်ုပ်​တို့လူခြင်းခွဲခဲ့ကြပါ​တော့သည်​ ။
(ကိုမြင့်​​ကျော်​နှင့်​​ပြော​သောစကားတို့မှာ အသင်းအဖွဲ့တစ်​ခု၏ လျှို့ဝှက်​အပ်​​သောအ​ကြောင်းအရာများဖြစ်​​နေသဖြင့်​
ထိုညမှစ၍ မိတ်​​ဆွေကြီးကိုမြင့်​​ကျော်​မှာ ကျွန်ုပ်​နှင့်​လမ်းခွဲသွားပြီး​နောက်​ လျှို့ဝှက်​မှတ်​တမ်းကြီး၏သတင်းကို
ကျွန်ုပ်​မှာလည်း အထက်​ကခိုင်း​စေ​သောအလုပ်​များကို မနိုင်​မနင်း​ဆောင်​ရွက်​ရင်း ကိုမြင့်​​ကျော်​အား​မေ့​လျော့​နေမိပြန်​​သေးသည်​ ။
၂၀၁၄ ဇန်​နဝါရီ ၈ ရက်​ ။
ရုံးခန်းထဲတွင်​ထိုင်​ရင်း လွတ်​ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်​ဖြင့်​လွတ်​လာ​သော ရာဇဝင်​လူဆိုးများစာရင်းကိုပြုစု​နေခိုက်​ ..
” မင်္ဂလာပါ အိုင်​အိုကြီး​ရေ… ဟို မစ္စတာကြိုက်​မီး​ပြောတဲ့ မှတ်​တမ်းစာအုပ်​ကိစ္စပြီး​တော့မယ်​ဗျ ”
” ဟာ.. ကျုပ်​​တောင်​​မေ့​နေတာဗျာ.. ဘယ်​လိုလဲ တရားခံကိုသိပြီလားဗျ ”
” ဘယ်​သူဆိုတာ ​သေခြာသ​လောက်​သိ​နေပါပြီ အိုင်​အိုကြီး​ရယ်​ .. သူတို့အသင်းလည်း ၁၂ရက်​​နေ့မှာ ကန်​​တော်​ကြီး​မျှော်​စင်​ကျွန်းမှာ ​တွေ့ဆုံကြလိန့်​မယ်​ဗျ ။ အဲ့ မှာပဲ တခါတည်းကိစ္စအပြီးရှင်းလိုက်​မယ်​​လေ .. .. အဲ..အိုင်​အိုစိတ်​ဝင်​စားရင်​လည်း ​မျှော်​စင်​ကျွန်း P3 စား​သောက်​ဆိုင်​ကို မနက်​၈ နာရီအ​ရောက်​လာခဲ့​ပေါ့ဗျာ ။
ကျုပ်​ကို​တော့မရှာနဲ့ဗျို့ ၊ သူတို့လိုပဲ မျက်​နှာဖုံးစွပ်​ထားမှာ …”
” ဘယ့်​နှယ်​​ပြောပါလိမ့်​ကိုမြင့်​​ကျော်​ရယ်​ … စိတ်​ဝင်​စားလွန်းလို့ အိပ်​လို့​တောင်​​ပျော်​မှာမဟုတ်​ဘူး… ကျုပ်​က​တော့ အသင်းဝင်​မဟုတ်​လို့ လာလို့ဖြစ်​မှာမထင်​ဘူးဗျာ ..သတင်းပဲ​စောင့်​​နေပါ့မယ်​ ”
” အင်း.. ကျုပ်​ကို​တော့ မစ္စတာကြိုက်​မီးက အသင်းဝင်​အဖြစ်​ သွင်း​ပေးထားလို့ အဲ့ပွဲသွားလို့ရတာ​လေဗျာ ။ ကျုပ်​ကိစ္စပြီး ပြီးချင်း ဖုန်းဆက်​လိုက်​ပါ့မယ်​ ။ စာအုပ်​ကိုလည်း အမကြီးပဒုမ္မာထံကို ​သေ​သေချာချာအပ်​လိုက်​ပါ့မယ်​ဗျာ .. ဂွတ်​ဘိုင်​ …”
ဤသို့ဖြင့်​ ကျွနု်​ပ်​မှာ ဇန်​နဝါရီ ၁၂ ရက်​​နေ့၌ ​မျှော်​စင်​ကျွန်း p3 စား​သောက်​ဆိုင်​တွင်​ မည်​သို့ မည်​ပုံ ဖြစ်​ပျက်​မည်​ဟု ​စောင့်​စား​မျှော်​လင့်​​နေရသည်​ကို စိတ်​မရှည်​နိုင်​​အောင်​ဖြစ်​မိ​နေ​လေ​တော့သည်​ ။
သားသား မယူထားဘူးနော် ဦးဦးစုံထောက်ကြီး
ဒုတ် .. ဒုတ် .. ဒုန်းးး
အဲ့ဒီနေ့ကျ တီဒုံကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကျိနေမှ ..
သူ့ဆီ စာအုပ်အပ်တာနဲ့ သွားလုပီး ဖတ်ပလိုက်မယ် .. ငိငိငိ
ဟီးးး ဒီတစ်ခါ အခန်းဆက်က အဆက်အတော်ပြတ်သွားတာကလား အိုင်ပီ ရဲ့
အဲ့ဒါကြောင့်လဲ အစအဆုံး ဇာတ်ကြောင်းပြန်လှန်ရသကိုး
ကိုမြင့်ကျော်ကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ဖို့ မှာထားလိုက်ပါမယ်ဗျာ။
တွေ့ ဆုံပွဲပြီးရင် . . .
တဟိဟိနဲ့ ပါးစပ်တောင် စေ့မရတော့ဘူး။
ဒါပဲနော်၊ဂဇက်မှတ်တမ်းစာအုပ်ကို အသားဖြူဖြူ ချမ်းချမ်းသာသာ အရပ်​မပုမမြင့်​ ၊အသက်​​လေးဆယ်​​ကျော် အမျိုးသမီးလက်ထဲ ရောက်အောင် လာအပ်ရမယ်။
ပထမပိုင်းကမေ့တောင်နေပြီ။ အခုအစကပြန်ရေးတော့မှ မှတ်မိတော့တယ်။ အဲနေ့ကျရင်တော့ အသားဖြူဖြူ ချမ်းချမ်းသာသာ အရပ်​မပုမမြင့်​ ၊အသက်​​လေးဆယ်​​ကျော် အမျိုးသမီးနဲ့အတင်းကပ်ထိုင်နေမှဖြစ်တော့မယ်
အမငီး ကြိုက်မီးကို တရုတ်ကြီးဆိုပါလား….
အဲဒီ စာအုပ်က သေချာတယ် ကြိုက်မီးနဲ. ဘောလချက် ညီနောင် ပေါင်းကြံတာနေမှာ..ဟိဟိ…
အမယ် ရုံးပြာတာလေး နံမယ်က မောင်တိုး ဆိုပါလား.. ဟေဟေဟေဟေး
အော်အော်..မေ့တော့မလို့…အာတီဒုံရဲ့​မောင့်​ဘလက်​ ​ဘောပင်​လေးလည်းပြန်ပေးလိုက်အုံးနော :-DD
အာတီဒုံကို မျက်​​ခြေမပျက်​ ​စောင့်​ကြည့်​ခဲ့တယ်​.. ကိုမြင့်​​ကျော်​ ဘယ်​အချိန်​လာလိုက်​လဲဟင်​…
လျှို့ဝှက်ကြော်ငြာကိုဖတ်ပြီး အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင် ဖော်နိုင်လို့လည်း စုံထောက်ကျော်ရာမညလို့ နာမည်ကြီးတာပေ့ါ။ စုံထောက်ကျော်ကြီးကို ကြောက်လို့ ယူထားတဲ့သူက အပေါ်ဆုံးမှ ဖြောင့်ချက်ပေးသွားပြီ။
Mont Blanc ဖောင်တိန် ပြန်မပေးသွားဘူး။ဟင့် ဟင့်…
Careless ဖြစ်မိတာ ကိုယ့်အပြစ်ပါ။
နောက်ဆုံး အခြေအနေအား တင်ပြပေးထားပါကြောင်း။
ကစွယ်တော်က တူးဆွ ဖော်ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ပေးပါသဖြင့်
အခုမှ ဇာတ်ရည်လည်တော့ တယ်။
ဒီနှစ်မှာ ပိုလို့ ပိုလို့ ပိုလို့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းတဲ့ အကြောင်းရှိနေတယ်။
စုံစမ်း ဖို့ သင့်တယ် နော။
အဲဒီ စကား နဲ့ နွယ်သူ ရွာ ပြန်ရောက်နေသလားဘဲ။
သေချာတာကတော့ အခုမှာ Love it က ပိုများ နေတော့မှာ။